Ciqaab Mawduuc Nuqul ah: Khuraafaadka, Xaqiiqda, iyo Taladayda | Martech Zone
In ka badan toban sano, Google waxay la dagaallameysay khuraafaadka ciqaabta nuqul ka koobnaanta ah. Maaddaama aan weli sii wado su'aalaha goobta, waxaan u maleynayay inay mudan tahay in laga wada hadlo halkan. Marka hore, aan ka wada hadalno oraahda:
Waa maxay Nuqul nuqul ah?
Mawduucyada nuqulku guud ahaan waxaa loola jeedaa waxyaabo muhiim ah oo ka kooban gudaha ama guud ahaan qaybaha gebi ahaanba u dhigma waxyaabo kale ama si la mid ah u muuqda. Badanaa, tani maahan khiyaano asal ahaan.
Google, Ka Fogoow Mawduuc Nuqul ah
Waa Maxay Ciqaabta Mawduuca Nuqulku?
Ganaax ayaa ka dhigan in bartaada internetka aysan mar dambe ku qorneyn natiijooyinka raadinta guud ahaan, ama in bogaggaaga si aad ah hoos loogu dhigay qiimeynta ereyada muhiimka ah ee gaarka ah. Ma jiro. Muddada. Google meesha ka saaray khuraafaadkan sanadkii 2008 hadana dadku wali wey ka wada hadlaan xitaa maanta.
Aynu tan sariirta wada dhigno mar uun, dadweynow: Ma jiro wax la mid ah "ciqaab nuqul nuqul ah." Uguyaraan, maaha sida dadka badankiisu ula jeedaan markay sidaa leeyihiin.
Google, Soo Bandhigida Ciqaabta Mawduuca Nuqul
Si kale haddii loo dhigo, jiritaanka nuqul ka mid ah nuqul ka mid ah boggaagu ma doonayo inuu ciqaabo goobtaada. Weli waad ku soo bandhigi kartaa natiijooyinka raadinta oo waliba xitaa si fiican ugu kala sareysaa bogagga leh nuxurka nuqullada ah.
Muxuu Google U Doonayaa inaad Ka Fogaato Mawduuc Nuqul ah?
Google waxay dooneysaa khibrad isticmaale oo ka sareysa Mashiinka Raadinta halkaasoo dadka isticmaala ay ka helaan macluumaad qiimo leh guji kasta oo ka mid ah natiijada raadinta. Waxyaabaha nuqulku ka kooban yahay ayaa baabi'in doona khibradaas haddii natiijooyinka 10 ee ugu sarreeya bogga natiijooyinka mashiinka raadinta (SERP) lahaa isku nuxurka. Waxay ku noqon doontaa jahwareer adeegsadaha isla markaana natiijooyinka mashiinka raadinta waxaa cuni doona shirkadaha madow ee SEO oo si fudud u dhisaya beero ay ka kooban yihiin si ay u xukumaan natiijooyinka raadinta.
Nuqullada nuqulka ah ee goobta ka jira ayaan loo cuskanaynin wax ka qabashada goobtaas illaa ay u muuqato in ujeeddada nuxurka nuqullada ahi ay tahay khiyaano iyo wax ka qabashada natiijada mashiinka raadinta. Haddii bartaadu ka cabato arrimo nuqul ka kooban… waxaan qabanaa shaqo fiican oo ah xulashada nooca nuxurka si loogu muujiyo natiijooyinka raadintayada.
Google, Ka Fogoow Abuurista Mawduuc Nuqul ah
Marka majiro wax ciqaab ah oo Google ayaa dooran doonta nooc uu soo bandhigo, markaa maxaad u baahan tahay iska ilaali nuxurka nuqullada ah? In kasta oo aan lagugu ciqaabin, adigu waxaa laga yaabaa wali dhaawacday awoodaada darajada sifiican. Waa tan sababta:
Google waxay u badan tahay inuu socdo ku muuji hal bog natiijooyinka… Midka leh maamulka ugu fiican adoo adeegsanaya backlinks ka dibna wuxuu qarinayaa inta kale natiijooyinka. Natiija ahaan, dadaalka la geliyay bogagga kale ee nuqullada ah ayaa ah mid si fudud u khasaara marka ay timaado qiimeynta mashiinka raadinta.
Bog kasta darajadiisu si weyn ayey ugu tiirsan tahay backlinks khuseeya iyaga uga socda bogagga dibedda. Haddii aad haysatid 3 bog oo isku mid ah (ama saddex dariiqo oo isla boggaas ah), waxaa laga yaabaa inaad dib uhesho bog kasta halkii aad ka heli lahayd dhammaan xiriiriyeyaasha u horseedaya midkood. Si kale haddii loo dhigo, waxaad dhaawaceysaa awooddaada inaad haysato hal bog oo urursanaya dhammaan backlinks iyo darajo si ka wanaagsan. Haysashada hal darajo oo hal bog ah natiijooyinka ugu sarreeya ayaa aad uga wanaagsan bogagga 3 ee bogga 2aad!
Si kale haddii loo dhigo… haddii aan haysto 3 bog oo nuxur nuxur leh oo mid kasta oo ka mid ah uu leeyahay 5 gadaal gadaal each midkoodna ma darajayn doono sidoo kale hal bog oo leh 15 gadaal gadaal ah! Nuqul ka kooban ayaa ka dhigan in boggagaagu uu midba midka kale la tartamayo oo uu dhaawici karo dhammaantood halkii aad ka qiimeyn lahayd bog weyn oo bartilmaameed ah.
Laakiin Waxaan Ku Haynaa Waxoogaa Nuqul Ah Oo Nuqulo Ah Oo Bogagga Gudihiisa Ah, Haddaba Waa Maxay ?!
Gabi ahaanba waa wax dabiici ah in nuqul ka kooban laga helo degel. Tusaale ahaan, haddii aan ahay shirkad B2B ah oo leh adeegyo ka shaqeeya guud ahaan warshado badan, waxaa laga yaabaa inaan haysto bogag bartilmaameed u ah shaqadeyda adeeggeyga. Inta badan sharraxaadda adeeggaas, dheefaha, shahaadooyinka, qiimaha, iwm. Dhammaantood waxay noqon karaan kuwo isku mid ah oo ka socda bog warshad ku xigta. Taasina gabi ahaanba waa macquul!
Adigu khayaano maleh inaad dib uqorto waxyaabaha kujira si aad shaqsi ahaan ugu gaar yeelatid shakhsiyaad kaladuwan, waa kiis gabi ahaanba la aqbali karo mawduucyo kala duwan. Waa tan taladayda, in kastoo:
Adeegso Cinwaannada Bogga Gaarka ah - Cinwaanka boggeyga, adoo adeegsanaya tusaalaha kore, waxaa ku jiri lahaa adeegga iyo warshadaha uu boggu diiradda saarayo.
Adeegso Sharaxaadaha Meta Gaarka ah - Sharaxaaddayda 'meta' waxay noqon doontaa mid gaar ah oo bartilmaameed sidoo kale.
Ku dar Mawduuc gaar ah - In kasta oo qaybo badan oo ka mid ah bogga la soo koobi karo, haddana waxaan ku dari lahaa warshadaha hoosta, sawirrada, jaantusyada, fiidiyowyada, markhaatiyada, iwm si loo hubiyo in waayo-aragnimadu ay tahay mid gaar ah oo bartilmaameed u ah dhagaystayaasha bartilmaameedka ah.
Haddii aad ku quudineysid 8 wershadood adeeggaaga oo aad ku darto bogaggan 8 oo leh URL-yo gaar ah, cinwaanno, sharraxaadda moodada, iyo boqolkiiba aad u badan (xiidmahayga oo aan xog lahayn 30%) waxyaabaha gaarka ah, ma socon doontid khatar kasta oo ah fikirka Google ee ah inaad iskudayeyso inaad qof khiyaanayso. Iyo, haddii ay tahay bog si fiican loo qaabeeyey oo leh xiriiriyeyaal la xiriira… waxaad si fiican ugu qiimeyn kartaa in badan oo ka mid ah. Xitaa waxaan xitaa ku dari karaa bogga waalidka oo leh aragti guud oo ku riixaya booqdayaasha bogag hoosaadyada warshad kasta.
Kawaran Haddii Aan Ku Badalo Magacyada Magaalo ama Magaalo Degmo Beegsiga Juqraafiyeed?
Qaar ka mid ah tusaalooyinka ugu xun ee nuxurka nuqullada ah ee aan arko waa beeraha SEO-ga ee qaata isla markaana nuqul ka sameeya bogag kasta oo juquraafi ah oo ay wax soo saarka ama adeeggu ka shaqeeyaan. Waxaan la shaqeeyay laba shirkadood oo saqaf ah hadda oo ay lahaan jireen la taliyayaal hore oo SEO ah oo dhisi jiray daraasiin magaalo- bogag xuddun ah oo ay si fudud ugu beddeleen magaca magaalada cinwaanka, sharaxaadda meta iyo waxyaabaha ku jira. Ma aysan shaqeyn… dhammaan boggagaas oo dhan waa la kala sarreeyay liidata.
Bedel ahaan, waxaan dhigay cag caag ah oo ay ku qoran yihiin magaalooyinka ama degmooyinku ay u adeegeen, waxaan dhigay bog aag adeeg ah oo leh khariidada gobolka ay ka adeegeen, waxaan u weeciyay dhammaan bogagga magaalada bogga adeegga… iyo boom service adeegga bogga iyo bogagga aagga adeegga labadaba cirka ayay ku shareerayn.
Ha u isticmaalin qoraallo fudud ama waxyaabaha beddelka beeraha ah si aad ugu beddesho kelmadaha sidan oo kale ah asking waxaad weydiisaneysaa dhibaato mana shaqeyneyso. Haddii aan ahay roofer oo daboolaya 14 magaalo… waxaan jeclaan lahaa inaan dib uxiriir iyo tixraacyo ka helo baraha wararka, boggaga lammaanaha, iyo baraha bulshada oo tilmaamaya boggeyga saqafka ah ee keli ah. Taasi waxay iga dhigeysaa inaan darajo yeesho mana jiraan wax xadidan inta keywords keywords keywords aan ku qori karo hal bog.
Haddii shirkaddaada SEO ay ku qori karto beer sidan oo kale ah, Google way ogaan kartaa. Waa khiyaano oo, mustaqbalka fog, waxay kuu horseedi kartaa inaad dhab ahaantii lagugu ciqaabo.
Dabcan, waxaa jira waxyaabo ka reeban. Haddii aad dooneysay inaad sameysato bogag badan oo goobta ku yaal oo lahaa waxyaabo gaar ah oo khuseeya inta lagu gudajiray oo dhan si aad khibrad ugu hesho, taasi maahan mid khiyaano ah… taasi waa shaqsi. Tusaale ahaan waxay noqon kartaa safarro magaalo… halkaasoo adeeggu isku mid yahay, laakiin waxaa jira kala duwanaansho xagga khibradda juqraafi ahaan ah oo lagu sharxi karo sawir iyo sharraxaad.
Laakiin Maxaa Ku Saabsan 100% Mawduucyada Nuqul Ee Aan Waxba Galayn?
Haddii shirkaddaadu daabacday war-saxaafadeed, tusaale ahaan, taas oo wareeggeedii sameysay oo lagu daabacay bogag badan, waxaad weli u baahan tahay inaad ku daabacdo boggaaga sidoo kale. Tan waan aragnaa badanaa. Ama, haddii aad ku qortay maqaal bog weyn oo aad rabto inaad dib u daabacdo boggaaga. Waa kuwan qaar ka mid ah hababka ugu fiican:
Canonical - Xidhiidh kanonnikada ah waa shay metadata ah oo ku jira boggaaga kaas oo u sheegaya Google in bogga uu yahay mid nuqul ah oo ay tahay inay eegaan URL ka duwan isha macluumaadka. Haddii aad ku jirto WordPress, tusaale ahaan, oo aad rabto inaad cusboonaysiiso cinwaanka URL ee Canonical, waxaad ku samayn kartaa tan Xisaabta SEO plugin. Ku dar URL asalka ah ee buug-gacmeedka Google-na waxa ay ixtiraami doontaa in boggaagu aanu ahayn mid nuqul ah asalkuna uu mudan yahay ammaanta. Waxay u egtahay sidan:
Hagaajinta - Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad si fudud ugu wareejiso URL-ka meesha aad jeceshahay inay dadku akhriyaan iyo makiinadaha raadinta si ay u muujiyaan. Badanaa waxaa jira waqtiyo aan ka saareyno nuqul nuqul ka mid ah degel websaydh waxaanan u wareejineynaa dhammaan bogagga darajooyinka hoose bogga ugu sarreeya.
Noindex - calaamadeynta bogga illaa noindex iyo ka reebitaanka makiinadaha raadinta ayaa ka dhigeysa mashiinka raadinta inuu iska indhatiro bogga oo uu ka ilaaliyo natiijooyinka mashiinka raadinta. Google dhab ahaantii wuu kula taliyaa arrintan, isagoo sheegaya:
Google kuma talinayso in laga xannibo marin-u-helidda guurguuraha ee nuqullada nuqul ka ah websaydhkaaga, ha ahaato faylka robot.txt ama habab kale.
Haddii aan haysto laba bog oo nuqul ah, waxaan jeclaan lahaa inaan isticmaalo astaamo ama dib u habeyn si wixii gadaal ah ee boggeyga loogu gudbiyo bogga ugu fiican, in kastoo.
Kawaran Haddii Qof Wax Xado Oo Dib U Soo daabaco Mawduucaaga?
Tani waxay ku dhacdaa dhowrkii biloodba mar boggayaga. Waxaan ka helayaa tixraacyo barnaamijkeyga dhageysiga waxaanan ogaadey in degel kale uu dib u daabacayo waxyaabaha ku jira sida iyaga u gaarka ah. Waa inaad sameysaa waxyaabo kooban:
Isku day inaad kula xiriirto bogga adoo adeegsanaya foomka xiriirkooda ama emaylka oo codso in isla markiiba lagaa saaro.
Haddii aysan haysan macluumaadka xiriirka, samee raadinta domain Whois oo la xiriir xiriirada ku jira diiwaankooda domain.
Haddii ay asturnaan ku leeyihiin goobaha ay ku shaqeeyaan, la xiriir adeeg bixiyahooda oo ogeysii in macmiilkoodu ku xadgudbayo xuquuqdaada.
Haddii aysan wali u hoggaansamin, la xiriir xayeysiistayaasha boggooda una ogeysii inay wax xadayaan.
Codsi ku qor faylka hoostiisa Xeerka Xuquuqda Muujinta Sanadka.
SEO wuxuu ku saabsan yahay isticmaaleyaasha, ma aha algorithms
Haddii aad si fudud maskaxda ugu hayso in SEO-ga uu ku saabsan yahay waayo-aragnimada isticmaale ee aanu ahayn xoogaa algorithm ah in la garaaco, xalku waa sahlan yahay. Fahamka dhagaystayaashaada, shakhsiyeynta ama qeybinta waxyaabaha ku lug leh kaqeybgal weyn iyo ku xirnaanshaha waa dhaqan weyn. Isku dayga in la khiyaaneeyo algorithms waa mid aad u xun.
Tags: affiliatekanonikadabogagga magaaladabogagga gobolkamawduucyo kala duwanciqaab nuqul nuqul ahmaxalliga ahbogagga ku saleysan goobtameelo badanisku dhufasho badankhuraafaadnoindexraadinta dabiiciga ahdarajaynta raadinta dabiiciga ahdarajeeyogudbintarobots.txtSEOhababka ugu fiicanquraafaad seoxaday waxyaabaha